INkanyamba UIrma NoMaria: AmaNgqina Aqhubeka Enceda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Intetho Yezandla yaseItali Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiChichewa IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba
IHolo yoBukumkani eseTortola ngaphambi nasemva kokuba ilungisiwe. Le Holo yoBukumkani yenye kwezintlanu ebezonakaliswe yiNkanyamba uMaria kwiiBritish and U.S. Virgin Islands ibe yeyokuqala ukulungiswa.
JANUWARI 19, 2018
AmaNgqina Aqhubeka Enceda Emva KweNkanyamba
ENEW YORK—AmaNgqina aqhubeka enceda emva kweNkanyamba uIrma noMaria, eyahlasela iindawo ezikufutshane neCaribbean ngoSeptemba 2017. Le nkcazelo ilandelayo isuka kwiofisi yesebe eseBarbados, eCuba, eDominican Republic, eFransi naseMerika isichazela ngendlela abazalwana abaye banceda ngayo.
Iindawo Eziphantsi Kwesebe EliseBarbados—EAnguilla, EAntigua, EBarbuda, EDominica NaseSt. Maarten (kwicala lamaDatshi)
Iikomiti ezintathu ezinceda xa kukho intlekele, eziquka ekwisebe laseFransi, zisebenza kunye ukuze zenze amaqela abazalwana noodade abaza kukhawuleza bancede abavakalisi abahlaselwe ziinkanyamba. Kugqitywe ekubeni kuphinde kwakhiwe kwiindawo eziphantsi kwesebe laseBarbados. Kuqikelelwa ukuba olo lwakhiwo luxabisa iidola eziyi-2.4 miliyoni ibe luquka ukulungiswa kweeHolo zoBukumkani eziyi-8 nezindlu zabazalwana eziyi-122. Ezinye izindlu eziyi-19 kuza kufuneka ziqalwe phantsi.
IHolo yoBukumkani eseGrand Bay, eDominica, ibiyonakaliswe kakhulu yiNkanyamba uMaria.
Indawo Ephantsi Kwesebe EliseCuba
Isebe lithi abazalwana noodade abahlaselwe yiNkanyamba UIrma bayancedwa. Bakhuthazwa nangeZibhalo ngabameli abasuka kwiofisi yesebe.
Indawo Ephantsi Kwesebe EliseDominican Republic
Iikomiti ezintathu ezinceda xa kukho intlekele, ziye zanceda abazalwana noodade abayi-57 abahlaselwe yinkanyamba. Abazalwana noodade basekuhlaleni banikele ngokutya, amanzi, impahla nezinye izinto ezifunekayo. Uthe ephela uOktobha zabe zonke izindlu ebezonakele zilungiswe ngamavolontiya asekuhlaleni.
Iindawo Eziphantsi Kwesebe LaseFransi—EGuadeloupe NaseSt. Martin
Isebe limisele ikomiti enceda xa kukho intlekele kwisiqithi esiseSt. Martin nakwisiqithi esiseGuadeloupe, ukuze ivelele umsebenzi wokwakha ekuqikelelwa ukuba uxabisa phantse iidola eziyi-1.4 miliyoni. Oku kuquka ukulungisa iiHolo zoBukumkani eziyi-12 eGuadeloupe, iiHolo zoBukumkani eziyi-2 nezindlu zabazalwana eziyi-24 eSt. Martin. Amavolontiya akhayo ayi-22 asuka eFransi, eGuadeloupe naseMartinique aza kuncedisa.
Indlu yeNgqina ibiyonakaliswe yiNkanyamba uMaria eSt. Martin.
Iindawo Eziphantsi Kwesebe LaseMerika—EBritish and U.S. Virgin Islands, EFlorida, EGeorgia, EPuerto Rico, ETurks Nakwiziqithi ZaseCaicos
Abazalwana noodade abangaphezu kwabayi-13 000 bahlaselwe yile nkanyamba. Sithethanje, iikomiti ezine ezinceda xa kukho intlekele, ziwenzile umsebenzi omninzi njengokulungisa izindlu zabazalwana noodade nokubanika ukutya namanzi. Lo msebenzi usaqhubeka usenziwa ePuerto Rico nakwiiBritish and U.S. Virgin Islands.
Abazalwana noodade bacoca indlu yeNgqina ePuerto Rico ibe angaphezu kwayi-3 200 ahlaselwe ziinkanyamba.
Amavolontiya awakhayo ayi-690, aza kuncedisa ekulungiseni iiHolo zoBukumkani nezindlu zabazalwana noodade. Ayi-450 aza kunceda kwiziqithi aze wona ayi-240 ancede eFlorida naseGeorgia. Kuqikelelwa ukuba lo msebenzi uxabisa ngaphezu kweedola eziyi-30 miliyoni ibe kuza kulungiswa ezi ndawo zilandelayo:
KwiiBritish and U.S. Virgin Islands – IiHolo zoBukumkani eziyi-5, izindlu eziyi-190
EFlorida – IiHolo zoBukumkani eziyi-40, izindlu eziyi-1 174
EPuerto Rico – IiHolo zoBukumkani eziyi-106, IiHolo zeeNdibano eziyi-2, izindlu eziyi-1 216
ETurks NaseCaicos – IiHolo zoBukumkani eziyi-2, izindlu eziyi-56
Sithandazela ukuba uYehova abomeleze abazalwana noodade abancedisayo. Siqinisekile ukuba ukuncedwa kwabazalwana noodade nokuthuthuzelwa kwabo ngeZibhalo kuza kubanceda bachache baze baqhubeke bemkhonza bemanyene uYehova, uThixo.—Nehemiya 2:18.